उत्कृष्ट खेलाडी मनोनयनमा क्रिकेटका ६ जना | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आज मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने
नेपालको राष्ट्रिय पोशाक दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी चौबन्दीचोली, फरिया (सारी) हुनुमा आपत्ति किन ? →
Posted on 04/09/2011 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, भदौ १८ पल्सर स्पोर्टस अवार्ड-२०६७ अन्तर्गत शनिबार विभिन्न चार विधा सार्वजनिक हुँदा ६ खेलाडी क्रिकेटबाट मनोनयनमा परेका छन्। त्यसमा चार खेलाडी र दुई प्रशिक्षक छन्। भदौ २५ मा हुने स्पोर्टस अवार्डका लागि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक हुँदा फुटबल दोस्रो नम्बरमा परेको छ । फुटबलबाट ४ जना मनोयननमा छन्। त्यस्तै बक्सिङ, शारीरिक सुगठनबाट २-२ तथा टेनिस, तेक्वान्दो, जुडो, टेबलटेनिस, एथलेटिक्स र बुद्धिचालबाट १-१ जना मनोनयनमा पर्न सफल भए।
२०६७ सालभर प्राप्त उपलब्धि र प्रदर्शनका आधारमा चार विधामा मनोनयन गरिएको जानकारी खेलाडी छनोट समितिका संयोजक तथा मञ्चका सचिव महेश आचार्यले दिए। अवार्ड कार्यक्रमकै दिन हरेक विधाबाट १-१ विजेता घोषित गरिनेछ।
१६औं एसियाली खेलकुदमा एकमात्र पदक दिलाएका बक्सर दीपक महर्जनले वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा क्रिकेटका राहुल बिक, फुटबलका रोहित चन्द, शारीरिक सुगठनका श्याम श्रेष्ठ र बुद्धिचालका विलमलाल श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। दीपक र राहुल लोकप्रिय खेलाडीको विधामा पनि मनोनयनमा छन्।
दीपकले एसियाली खेलकुदको ८१ केजीमा कांस्य जितेका थिए। गतवर्ष नै उनले थाइल्यान्डमा सम्पन्न किङ्स कपबाट नेपाललाई ३२ वर्षपछि कांस्य पदक दिलाएका थिए।
एसियाड प्रदर्शनका आधारमा दीपककै प्रशिक्षक प्रचण्ड शर्मा वर्ष प्रशिक्षकको मनोनयनमा छन्। प्रचण्डले महिला फुटबलका प्रशिक्षक ध्रुव केसी, शारीरिक सुगठनका ज्ञानेन्द्र नकर्मी तथा क्रिकेटका जगत टमाटा र श्यामसन जंग थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्।
विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-४ मा ८ विकेटसहित वर्षभर सबैखाले क्रिकेटमा ३३ विकेट लिएका राहुलले दीपकलाई टक्कर दिएका छन्। एसिसी यु-१९ नेपाल उपविजेता बन्दाका उपकप्तान उनी २१ विकेटसहित उत्कृष्ट बलर भएका थिए।
विलमलालले रुसको खान्तीमा ३९औं चेस ओलम्पियाडबाट फिडे मास्टरको दर्जा पाएका थिए। उनी दोस्रो नेपाली फिडे मास्टर हुन्। ओलम्पियाडमा सुरुका दुई खेल ग्रान्ड मास्टरसँग हारेका विलमलाल त्यसपछि सात खेलमा अपराजित भए। त्यस्तै नेपाली फुटबलमा चम्केका रोहितले गतवर्ष भारतीय आई लिगमा हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बाट खेले। उनी लिगमा विदेशीमध्ये उत्कृष्ट पाँचभित्र परेर नेपाली खेलाडीको गौरव आईलिगमा उच्च पारे। उत्तर कोरियासम्मिलित एएफसी च्यालेन्ज कप छनोटमा रोहितले रक्षपंक्तिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा नेपाल दोस्रो चरण पुग्न सफल भए।
उता सातौं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण दिलाएका श्यामले विश्व शारिरीक सुगठन च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जिते, जुन शारीरिक सुगठन नेपालले पाएको ठूलो थियो। श्यामका प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र नकर्मी प्रशिक्षक विधाको मनोयननमा छन्।
एकै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका फुटबलका जमुना गुरुङ र अनु लामासँगै टेनिसकी अश्लेषा लिसानोविच, तेक्वान्दोकी मनिता शाही र एथलेटिक्सकी कान्छीमाया कोजु उत्कृष्ट महिला खेलाडी हुने दौडमा छन्।
बंगलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा जमुना र अनुकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। नेपालले गरेका ३४ मध्ये उनीले मात्र २१ गोल गरेका थिए। कप्तान जमुनाले भारतविरुद्ध फाइनलबाहेक सबै खेलमा कम्तीमा २ गोल गरेकी थिइन्। तीन ह्याटि्रकसहित ११ गोल गरेकी अनु प्रतियोगिताको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीसमेत भएकी थिइन्। उक्त फुटबल टोलीका योजनाकार ध्रुव केसी प्रशिक्षक विधाको मनोनयनमा छन्।
ग्वाङझाउ एसियाडमा १ सय ४० सदस्यीय नेपाली टोलीमा उमेरले कान्छी टेनिसकी अश्लेषाले गतवर्ष नेपालमा भएका चारवटै प्रतियोगितामा उपाधि जितेकी थिइन्। १४ वर्षकै उमेरमा एपिएफ राष्ट्रिय टेनिसमा नेपालकी नम्बर एक मालिका राणालाई हराएर च्याम्पियन बनेकी उनले एसियाडमा पनि आफ्ना प्रभाव देखाएकी थिइन्। अश्लेषाले सिंगल र डबल्समा मंगोलियाका खेलाडीलाई हराएर सनसनी भएका थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कोरियन खुला तेक्वान्दोमा स्वर्ण जितेकी मनिता महिला विधाको अर्को दाबेदार हुन्। उनले भारतको विशाखापट्नममा प्रथम इन्डियन खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा स्वर्ण र दक्षिण कोरियाको बुसानमा सातौं गियोन्याङमदो गभर्नर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा रजत जितेकी थिइन्।
१६औं एसियाली खेलकुदमा ५ किमी दौडमा १६ मिनेट ४९.५ सेकन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी धाविका कान्छीमायाले पाथीभरा म्याराथनतर्फ हाफ म्याराथन र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि जितेकी थिइन्।
वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी युवा विधामा तीन क्रिकेटर पृथु बाँस्कोटा, सरिता मगर र नेरी थापासँगै जुडोकी फुपूल्हामु खत्री र टेबलटेनिसका अनिश श्रेष्ठ मनोनयनमा छन्।
थाइल्यान्डमा सम्पन्न एसिसी यु-१९ इलाइट कपमा फाइनलसम्म पुगेको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका पृथु आफैले प्रतियोगितामा ४६.५० को औसतमा ९३ रन बनाउनुका साथै २ विकेट लिएका थिए।
आफ्नो कप्तानीमा नेपाललाई लगातार दोस्रो वर्ष एसिसी यु-१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि दिलाएकी नेरीले सर्वाधिक १ सय ९१ रन बनाउनुका साथै ८ विकेट लिएकी थिइन्। प्रतियोगितामा उनी उत्कृष्ट ब्याट्सवुमन समेत भएकी थिइन्।
दुईपटक वाईवाई महिला राष्ट्रिय क्रिकेट हुँदा नेरीले पहिलोमा ११ विकेट लिँदै उत्कृष्ट बलर तथा दोस्रोमा नेपालगन्जलाई विजेता बनाउँदा ९ विकेटका साथ उत्कृष्ट बलर र वुमन अफ द सिरिज जितेकी थिइन्। यता सरिताले भने एसिसी यु-१९को उपाधि दिलाउँदा निर्णायक खेलमा शानदार प्रदर्शन गरिन्। फाइनलमा भुटानमाथि ६ विकेटको विजय पाउँदा उनी १ विकेट लिई अविजित २३ रन बनाएर वुमन अफ द फाइनल बनिन्। प्रतियोगितामा १ सय २ रन बनाएकी उनले ४ विकेट पनि लिएकी थिइन्। काठमाडौंलाई वाईवाई यु-१९ राष्ट्रिय च्याम्पियन बनाउँदा पनि उनको प्रदर्शन उच्च थियो। क्रिकेटरको बाहुल्य रहेको युवा विधामा थाइल्यान्डमा सम्पन्न एसियन युथ एन्ड जुनियर जुडो च्याम्पियनसिपमा कांस्य जितेर फुपुले आफ्नो दाबेदारिता प्रस्तुत गरेकी छन्। अनिशले भने भारतको देहरादुनमा दक्षिण एसियाली टेबलटेनिस च्याम्पियनसिबाट दुई कांस्य भिœयाएका छन्। उनले जुनियर ब्वाइजको टिम इभेन्ट र ब्वाइज डबल्समा कांस्य जितेका थिए। ३३औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनी जुनियर च्याम्पियन हुन्।
एसिसी यु-१९ महिला च्याम्पियनसिप जित्दा टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका श्यामसनले काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ लाई पहिलो पटक वाईवाई महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको च्याम्पियन बनाए।
त्यस्तै जगत टमाटा एसिसी यु-१९ इलाइट कपमा नेपाललाई फाइनल पुर्‍याउने प्रशिक्षक हुन्। त्यही प्रदर्शनले नेपाल यु-१९ को विश्वकपलाई छनोट भएको छ। उनकै नेतृत्वमा भैरहवाले पेप्सी ट्वान्टी-२० राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो।
स्पोर्टस अवार्डका ८ विधामध्ये एसएमएस भोटिङका आधारमा विजेता छानिने लोकप्रिय खेलाडीको मनोनयन भने सार्वजनिक भइसकेको छ। पारा एथलिट, स्पेसल र लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिने मञ्चले जनाएको छ।
This entry was posted in खेलकूद, नेपाल समाचार. Bookmark the permalink.